Manjos Natures Tranquil Villa.. Zive uxolo
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguManoj
IManjos yinkampani yokwamkela iindwendwe ephethe iivillas ezili-12 eKashid Beach ukusukela ngo-2015. I-Natures Tranquil Villa yenye yazo..
Ngokusisiseko le yindlu yefama eyi-3BHK kodwa ifakwe zonke izinto zale mihla njenge-wifi, ii-acs, i-smart TV, isitya, i-plunge pool, itafile yephuli, i-badminton, ibhola yomnyazi, indawo yokutyela egadi yangaphandle, njl. enkulu yayo 3 km emhlophe isanti beach kunye nemidlalo yamanzi.
Sinompheki wasendlini ophakela ukutya okwenziwe ngekonkani ekhaya xa ecelwa i-la carte.
Indlu yaseFama inamagumbi okulala ayi-2 ac anezindlu zangasese ezincanyathiselwe kumgangatho ophantsi kunye negumbi lokuhlala.
Igumbi lokulala lesithathu likumgangatho wokuqala kunye nendlu yangasese encanyathiselweyo kodwa inethayile entle yokuhlala..
Sine-Plunge pool emalunga ne-3.5 yeenyawo ubunzulu ilungele abantwana okanye nje ukuhlala kunye nokusela.
Sinemithi emininzi kwipropathi yethu, ii-hammocks, izitulo ezihleliyo, i-badminton, itafile yephuli, i-carom, i-basketball njl.njl ukwenza ukuba ukuhlala kwakho kubande ngakumbi..
Sinompheki wethu wasekhaya esenza ukutya kwekonkani okusanda kulungiselelwa ekhaya kodwa ngeeyure ezi-3 phambi kwexesha.
Jain, Veg, Non Veg, Barbecue, Bonfire, etc konke ukulungiselela wena.
Sivumela iHookah ngaphandle.
Abasebenzi bethu baqeqeshwe kakuhle ukuba bathethe kakuhle kwaye bakunyamekele kakuhle ngoko ke nceda uphathe ngentlonipho.
Umculo ongxolayo emva kwentsimbi yeshumi ebusuku awuvumelekanga njengoko siselunxwemeni lwehlathi.
Ukubonwa kweentlobo zeentaka ezingaqhelekanga zixhaphakile ngaphandle kweenkawu, oomatse, njl.
Njengoko siphakathi kwindalo, iinyosi kunye neencukuthu zinokukukhathaza kodwa yonke loo nto iyinxalenye yendalo.
Amasele njlnjl ayenokubonwa.
Sibonelela ngeesepha, iitawuli zobuso, iitawuli zokuhlambela, iphepha langasese, ijeli yeshawa, njl.
Akukho mfuneko yokuba kuqokelelwe ingqokelela njengoko abasebenzi bekhona 24/7.
Ukuba ufuna ipakethe kunye nokuhlala kunye nazo zonke izidlo (i-buffet) ngoko sibonelela ngayo.
Siziimitha ezingama-700 ukusuka kolu nxweme luhle lwesanti emhlophe eekhilomitha ezi-3 olubizwa ngokuba yiKashid Beach edume ngemidlalo yayo yasemanzini (iParasailing, iJet Ski, iBanana, kunye neBumper), ii-ATV, amahashi, iinkamela, ukukhwela iDinghy, ukutya kwaselwandle okutsha, uluhlu alupheli.
I-15 km kude yinqaba iMurud Janjira esiqithini ngoko ke ibandakanya ukukhwela isikhephe ukuya apho.
Kwakhona kumgama oyi-15 km kude yiPhansad Wild Life Sanctuary enentaka ezininzi kunezilwanyana.
Iingcebiso zam yiKorlai Lighthouse kunye neFort eza iikhilomitha ezili-10 ngaphambi kweKashid ukuba uvela eMumbai okanye ePune.
I-Kashid ngaphandle kokuba lulwandle nje lukunika imvakalelo yoxolo lwangaphakathi ngalo lonke ixesha usiza apha.. umoya olapha ngowona uhlaziyekileyo endakhe ndawuhlala ixesha elide.. Ihlathi kunye nentaba esemva kwekashid inezilwanyana zasendle ezimangalisayo.. iinkawu zinjalo. umbono oqhelekileyo kwi-kashid
Nam ndiya kuloba kwaye ndingakuthatha nawe ukuba kungosuku lweveki..
I-Kashid iluyolo lomfoti njengoko kukho iindawo ezingasemva ezothusayo..
Imidlalo yamanzi elunxwemeni yibhonasi..
Sinomgcini wethu uMnu. Raju kunye nenkosikazi yakhe ekhitshini (elinomnyango owahlukileyo) kulo lonke ugcino lwendlu yakho, inkonzo, iodolo yokutya kwaye ngokusisiseko sikutotose ngayo yonke indlela.
Ndihlala eKashid ngoko ke imizuzu emi-5 kude nanini na xa undifuna.
Ungandimema kwakhona ukuba ndifumane isiselo ukuba ufuna inkampani okanye ulwazi lwasekhaya.
Sinomgcini wethu uMnu. Raju kunye nenkosikazi yakhe ekhitshini (elinomnyango owahlukileyo) kulo lonke ugcino lwendlu yakho, inkonzo, iodolo yokutya kwaye ngokusisiseko sikutotose n…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kashid